Shirkadda Huawei ayaa soo saari doonta kalabar taleefannada casriga ah ee ay hindisay sanadkan | Androidsis
Huawei wuxuu ahaan lahaa booska gooyay wax soo saarkii taleefankeeda casriga nus sanadkan iyada oo ay tahay sababta kaliya ee lagu yareyn karo kharashyada; dhibaatooyinka oo dhan waxay u sabab yihiin suurtagal la'aanta haysashada mobilada bixiya Adeegyada Google Play.
Oo waa taas Shirkadda weyn ee Aasiya ayaa ku qasbaneyd inay xamaasho inaad ku aragto suuq kaa hadhay qaybahaas reer Galbeedka ah. A Huawei in ayaa sugeysa Biden Waxaad dib u eegi kartaa wax kasta oo ku dhacay maamulka Trump iyo mamnuucida adeegsiga adeegyada Google Play.
Xitaa ka dib iibisay sumcaddaada Sharaf, Huawei wuxuu sii wadaa inuu isku laabo naftiisa si uu u yareeyo saameynta halista ah ee iibka. Waana taas sida laga soo xigtay Nikkie Asia, Huawei waxay ogeysiin lahayd alaab-qeybiyeyaasheeda in amarada qaybaheeda casriga ahi ay goyn doonaan in ka badan kala badh sannadkan. Gaar ahaan 60%.
Warbixinta ayaa xustay ilo laga helo iibiyeyaal badan kuwaas oo shaaca ka qaaday in shirkaddu kaliya qorsheyneyso inay dalbato qaybo inta udhaxeysa 70 ilaa 80 milyan oo taleefannada casriga ah sanadka 2021. Haddii aan ognahay in shirkaddu ay qaybisay 189 milyan oo taleefannada Huawei ah, gooynta ayaa ka badan inta muuqata.
Isla taas Warbixintu waxay muujineysaa in qaybaha ay la xiriiraan mobilada 4GMaaddaama aysan rukhsad ka haysan Mareykanka inay soo dejiso qaybo ka mid ah taleefannada casriga ah ee 5G.
Waqtigaan la joogo aad bay u caddaan kartaa in xannibaadaha ay qaadeen sanadkii hore maamulka Trump ay keenayaan god dhab ah dhaqaalaha shirkadda Shiinaha. Iyo haddii maamulka cusubi uusan ku sii adkaanayn tilmaamaha, wax waliba way u muuqdaan waxay tilmaamaysaa in Huawei ay tahay inuu sii wado dib-u-habeynta nafteeda illaa uu ka helo meel bannaan halka ay ku sii kori karto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Shirkadda Huawei ayaa hoos u dhigi karta wax soo saarkeeda casriga ah nus sannadkan
Xiaomi Mi Note 10 iyo Mi Note 10 Pro waxay helayaan cusbooneysiinta Android 11